Isbadal Waa lagama Maarmaan.
“ ALLE MA BADALO WAXA QOOM KU SUGAN, ILAA QOOMKU BADALO WAXA NAFTIISA KU SUGAN” Suurada 13- Ayaadda- 11.
Waxa nafteena ku sugan waxay noqon-karaan waxa aan aaminsanahay,waxa aan ku firkirayno, Diin ahaan,Dhaqan ahaan iyo Dhaqaale ahaan. Si ay isu badasho xaaladda adag ee aan hadda ku suganahay, waa in aan badalno,waxa aan aaminsanahay iyo sida aan u fikirayno. Waa isku xirantahay, waana shardi.
Sida Alle ku sheegay Quraanka, ma jiro isbadal ku imaan kara xaaladda Qoom ku suganyahay—Ilaa Qoomkaasi/ Dadkaasi badalaan waxa naftooda ku jira. In la badalo waxa nafta ku jira ma ahan wax sahlan, waa waxa ugu adag ee insaanka taariikhdiisa soomara. Waa wixii Nabi Muxamed iyo Qaraabadiisii ku-kala dhinteen/ Ku kala tageen.Waa waxa Rususha loo soo diro oo kutubta loo soo dajiyay,si ay u timaado isbadal ku yimaada Fikirka iyo Qiimaynta umaddaas.
Dhamaan Rusushii lasoo diray,Dhamaan kutubtii lasoo dajiyay, waxay dalbayeen isbadal ku dhaca Umadaha. In la hagaajiyo waxa nafta ku jira si xaalada guud ee umadaasi u hagaagto .
Waa dabeeci in ummaduhu diidaan isbadalka oo ay ka doortaan dhimasho. In la difaaco oo lagu dhaganaado wixii horay loo bartay iyo dhaqankii awooweyaasha waa dabeeci .
Haddana, waa daruuri in laga tago caado iyo dhaqan aan wax tar lahayn,si loo helo nolol dhaanta mida markaas jirta .
Tusaale ahaan, waydii qofka Soomaaliga ah ee maanta jooga:
“Maxaad haysataa oo aad ku faraxsantahay noloshaada ”?
Wuxuu ku leyahay waxba , Dowlad la`aan, Amni la`aan , Dhaqaale la`aan ,Qaxooti, Qax iyo burbur , Diin la`aan , Dulli iyo gaajo …. Wax weyn oo aan ku faano ma hayno !! . Sidaas ayuu kuugu jawaabayaa. Waydii su`aal kale “ Diyaar ma u tahay inaad badasho afkaartaada iyo waxa aad aaminsantahay ?” Jawaabtu waa maya iyo waliba la yaab . Maxaan badalaa maxaan ka tagaa ! waxaan ahay Muslim Ahlu sunne – wal-jamaacah – Shaafici – salafi !!.
Maxaan badalaa? waa dabeeci in qofku difaaco oo ku dhaganaado waxa uu aaminsan yahay . haddana waa lagama maarmaan in lagu adkeeyo oo lagula dagaalamo in uu ka tago waxa naftiisa ku jira wax-kamid ah si isbadal loo helo .
Adkaanshaha iyo dhibta arrintaan wuxuu ka imaanayaa saddex (3) arrimood :
1) Ayada oo ay dabeeci tahay in qofku difaaco dhaqankiisa iyo caqiidadiisa. Taasi waa arrin lagu abuuray Insaanka .
· Taas waxaan ku daawayn karnaa inaan eegno oo raacno ayaadahay quraanka ee inoosheega inaan lagu dhaganaan waxa kulaquman ee aad dhaxashay.
· Tusaale ahaan- SUURADDA 1 aad AAYADDA –170.
· SUURADDA 43- AYAADDA 22-ILAA 24.
· SUURADDA 26- AYAADDA- 70-ILAA 77.
Arrinta dhaqan diidnimada iyo Caqli iyo Cilmi raacnimada ee quraanku keenay waa arrin macruuf ah oo qofkasta oo wax-uun aqoon ah uleh diinta uu garan karo.
Marka haddaad naftaada u diyaariso raacidda QURAANKA IYO CAQLIGA saliimka ah waxaa kuu fududaanaysa inaad iska iloowdo hadal haynta iyo diin ka dhigashada waxa aan ku anfacayn oo aan shaqayn Karin. Waa in aad ogaato inay jiraan wax yaabo badan oo asaagaa kaa reebay oo aad u haysato in aydiin yihiin runtiina aan Diin ahayn sal iyo raad midnana lahayn.
2) Inta badan qofku waxa uu aaminsanyahay waxuu u haystaa inuu xaq yahay oo aan xaq kale jirin. Taas laftigeedu waa fiicantahay.laakiin su,aashu waxaa weeye:
· Waxa aad aaminsantahay ma ku anfaceen oo asaagaa makaa kormariyeen, mise waa dhalanteed iyo dhaan dabagaalle?
· Tankale, waxa aad aaminsantahay maku dadaashay in anay wax jira oo caqligal ah yihiin mise waad iska qaadatay? Dhaqan ahaan waxaan lahaan jirnay ama dadka qaar wali aaminsanyihiin afkaar aan sal Diinta kulahayn Caqligana aan gali Karin misana aad loo rumaysanyahay oo aad loodifaaco. Haddase dad badan ka ilbaxay oo ogaaday inaysan jirin. Su,aashu waxaa weeye, Aaminsanaantaas afkaarta aan jirin ee diin ahaan loo aamin sanyahay madhamaatay oo hadda dadku 100% wax sax ah ayay aaminsanyihiin mise wali fari kama qodna oo waxaan dhex dabaalanaynaa khuraafaad badan? Taas danbe ayaan aaminsanahay. Haddii wax walba inoo saxanyihiin sidaan hadda nahay ma,noqoneen, Allena inama dulmin ee wixii aan xaqqa u lahayn ayuu nasiiyay. Hogaamiye caqli leh ama shiikh diineed ee xikmad iyo caqli u saaxiiba ah oo soomaali ah masheegan karo inuu ku hagay umaddiisa wax sax ah, ama uu ku quudiyay akhbaar run ah diin iyo dunuwi midna.
Haddii hogaamiye ama shiikh caaqil ah sheegto inuu ku hagay umaddiisa wadadii fiicnayd isla markaasna siiyay akhbaartii ay u baahnaayeen( The needed information) Waxaa beeninaya natiijada umadiisu ay maanta hayso. Sababta ugu wayn ee soomaali u tahay sida ay maanta tahay waa marin habaabin Diineed iyo siyaasadeed (They were misled)
3) Inta badan dadku kumo baraarugsana xiriirka ka dhexeeya waxa la, aaminsanyahay iyo waxa la yahay .Sikale haddaan u dhaho xiriirka ka dhexeeya waxa qofku ku fikiro , aaminsanyahay iyo Naloshiisa caadiga ah .in waxa qofku yahay ay tahay sawirka waxa uu aaminsan yahay . Nabi Muxamed Nabad iyo Naxariis korkiisa ha ahaatee wuxuu yiri “ CAMALKU WAA NIYADA- waxa qofku ku fikiro- QOF WALBANA WUXUU HELAA WUXUU NIYAYSTAY” Wuxuu ku fikiray. Waxaa wariyay Cumar ibnu khidaab. Dhamaan Diinihii iyo kutubtii Alle soo dajiyay, Dhamaan Dadkii xikmadda iyo Caqliga lagu yaqaanay, Cilmi iyo tijaabada intuba waa isku waafaqsan yihiin Qaaciidadaas. “ Qofku wuxuu yahay waxa uu ku fikiro iyo sida uu iska dhigo” Waa qaanuun ILAAHI AH oo aan isbadalin. Ma sheegan karo hogaamiye Diineed iyo mid dhaqan iyo mid siyaasadeed inuu umaddiisa siiyay wixii ay u baahnaayeen haddana ay heleen wax xun oo noloshooda dumiyay. Waxa ay umadda maanta noqotay waxay ka dhalatay wixii lagu quudiyay ee afkaar ahaa. Mana isbadalayaan oo dowladnimo iyo Mujtamac noqosho ma u bislaanayaan ilaa laga qubo wixii lagu quudiyay ee anfici waayay, oo lasiiyo Afkaar iyo ma,baadi u keeni kara wanaaga ay rabaan.
Arrinta imurjisa in badan waxaa weeye marka aan arko oo ku qanco inaan dadkaygu ogayn, In waxa ayku suganyihiin ee dhibaatada ah, ay kadhalatay waxa ay aaminsanyihiin iyo sida ay u fikiraan. Innaga ayaa isu-keennay dhibtaan, cidkale oo ku eedaysan oo inookeentay majirto,innaga ayaana ka bixi karna markaan badalno dhaqankii iyo afkaartii ay kadhalatahay dhibta ina haysata.
Su,aasha muhiimka ah waxaa weeye, waxa aan aaminsanahay ama aan ku fikirayno ma saxbaa mise waxbaa ka qaladan ?
Haday jawaabtu tahay waa sax 100%.
Haddaba, maxaa Alle noo cadaabaa ? wax walba waa ku dhibqabnaa khilaaf, qax ,qaxoontinimo , Dowlad la,aan . Maxaa Alle noo cadaabaa hadaan sax nahay ?
Taasi sow la mid ma aha, warkii Alle ka sheegay Yahuuda iyo Nasaarada “markay dheheen waxaan nahay caruurtii Alle , Allena waa na jecelyahay . Waxaa loogu jawaabay haday arintu sidaas tahay, maxaa ALLE idiin cadaabaa. Sidaas ma ahee, waxaa tihiin dad , dadka ka mid ah” Suurada 5aad Ayada 18
Ma dhicikartaa in aan sax nahay oo waxa aan aaminsanahay iyo waxa aan ku fakarayno ay sax yihin , lakiin gardaro iyo dulmi naloo cadaabay oo dalkanagii iyo Guryaheeni loo baabiyay .
Jawaabtu waa maya , ma jirto, mana suuroobi karto, in Alle na dulminayo ama na gardaraysanayo. “Alle waa ka sareyaa arintaas’. Sida uu Alle ku sheegay Suurada- 11 Aayada 117. “ Rabigaa ma aha mid iska halaaga magaalooyin, ayada oo dadka magaaladaas dagan dad fiican oo wax fiican sameeya yihiin .”
Marka sidee isu waafajin karnaa, sida aan nahay iyo waxa aan aaminsanahay . Wax fiican ayaan aaminsanahay , wax xuna waa nahay !!. Dhabtu waxaa weeye, waxa aan nahay, waa waxa aan aaminsanahay . Dhamaan dhibaatada nahaysata dhinac walba waxa ay ka dhalatay waxa aan ku fikirayno .
Alle Wuxuu yiri “ Wixii idinkudhaca oo masiibo ah, waa waxay kasabtay gacmihiinu , wax badana Alle waa idiin cafiyay .” Suurada 42aad Ayada 30aad .
Hadaan xunahay Fikirkeenu waa xun yahay. Hadaan fiicanahay fikir keenu waa fiican yahay . “Camalku waa niyada qof walba wuxuu helayaa wixii uu niyoodo .” xadiis Rasuul oo Cumar wariyay.
Sunada Ilaahay kuma shaqayso mana u samaysna isbadbadal aan joogto ahayn . waxay u shaqaysaa qaab joogto ah, oo aan isbadalin. Xumaan Xumaan , Wanaag … Wanaag . Ma jirto wanaag xumaani ka dhalato ama xumaan wanaag ka dhasho .
Haddad aamisantahay wax wanaagsan…. wax wanaagsan ayaad helaysaa. Hadaad xumaan ku fikirto xumaan ayaad helaysaa .
Waxay la mid tahay adiga oo Galleey abuuray waxaa kuu soo baxaya Galleey , hadaad Digir abuurto waxaa ku soo baxaya Digir .
Ma jirto wax kale, waa qaanuun Illaahi ah, oo aan isbadalin. Ma jirto in aad wanaag aaminsantahay hadana aad xumaan hesho .
Xaalada aan maanta ku suganahay waxay ka dhalatay dhaqankanaga iyo sida aan u fikirayno wax meel kale ka yimid ma aha . Illaahay nama dulmin ee anaga ayaa nafteena dulminay, cidkale oo nagu soo duushay, oo naqabsatay ma jirto, annga ayaa isku-soo duulnay oo is qabsanay . Marka dhibaatada oo dhan waxay ka dhalatay sida aan u fikirayno iyo waxa aan aaminsanahay . Haddaba, si Ilaahay ma badalayo xaaladaan dhibta badan ee aan ku suganahay waa in aan badalo afkaar teena iyo dhaqan keena , “Alle ma badalo waxa qoom ku sugan yahay ilaa ay badalaan waxa Naftooda ku jira .”